Golaha Wakiilada Hirshabeelle oo ka walaacsan dagaal Beeleed ka soo cusboonaaday Xuduuda Jalalaqsi iyo Ceel-baraf – Kalfadhi
Golaha Wakiilada Hirshabeelle oo ka walaacsan dagaal Beeleed ka soo cusboonaaday Xuduuda Jalalaqsi iyo Ceel-baraf
JOWHAR, 17 JAN 2019 (KALFADHI)-Golaha Wakiilada ee Maamulka Hirshabeelle ayaa kulan deg deg ah ka yeeshay dagaal beeleed ka soo cusboonaaday Xuduuda u dhaxeysa degmada Jalalaqsi iyo degaanka Ceel-baraf ee gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo ah gobolada ay ka kooban tahay Hirshabeelle.
Xildhibaanada oo ka soo jeeda beelaha dagaalamaya ayaa isugu yimid kulan ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Waxaana sidoo kale kulanka ka qeyb galay masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Sh/Dhexe iyo qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle.
Markii uu kulanka soo dhamaaday ayaa waxaa laga soo saaray qodobo u badan baaq oo loo jeediyay dhinacyada ku dagaalamaya degmada Jalalaqsi iyo degaanka Ceel-baraf oo ku yaala Xuduuda labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim oo ka mid ah Xubnihii kulanka ka qeyb galay islamarkaana la hadlay Kalfadhi ayaa faah faahiyay waxyaabaha ka soo baxay kulankaasi deg dega ah ay yeesheyn Xubno ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
“Sidaa ogeyd muddo waxaan ku maqneen fasax, hada Jowhar ayaa ku soo laabanay si’aan ugu diyaar garowno Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka, waxaana kulan gaar ah ka yeelanay colaadda Jalalaqsi iyo Ceel-baraf “, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim oo ka tirsan Golaha Wakiilada Hirshabeelle.
“Waxaan ka soo saarnay baaq nabadeed, dhinacyada waxaan ka dalbanay iney si deg deg ah dagaalka u joojiyaan, maamulada labada dhinac ayaa sidoo kale la hadalnay si Ciidamo loo kala dhax-dhigo”, ayuu u sheegay Kalfadhi Xildhibaan Maxamed Bashiir.
Xildhibaan Maxamed Yuusuf Colow oo sidoo kale ka mid ah Xubnihii kulankaasi ka qeyb-galay ayaa Kalfadhi u sheegay in dhawaan halkaasi Ciidamo loo diri doono si loo joojiyo xiisadda taagan iyo dhaq-dhaqaaqyada ciidan ee ka socda Xuduuda labada gobol.
“Waxaan la hadalnay Madaxweyne Waar iyo ku xigeenkiisa Cali Guudlaawe waxaana ka dalbanay in Ciidamo si deg deg ah loogu diro aagga dagaalka ka dhacay”, ayuu yiri Xildhibaan Colow oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi ee maamulka gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Caga-joof ayaa Kalfadhi u sheegay in halkaasi muddo maalmo ah ay ka taagneed xiisada u dhaxeysa labada maleeshiyo beeleed ee Jalalaqsi iyo Ceel-baraf ayna ku dhintay ugu yaraan shan qof oo shacab ah.
“muddo bil ku dhaw waa taagneed xiisadda, waxaa ka dhacayay dilal iyo dagaal aan badneed, dadkaan waxay colaadooda ka bilaabatay ganacsiga qaadka ee Jowhar ka soo dega”, ayuu sheegay Maxamed Nuur Caga-joof.
“Arintaan maamulka Hirshabeelle waxba kama qaban karo, waa in dowladda dhexe soo faragelisaa, hadii aan hada wax laga qaban waxay gaari doontaa meel daran”, ayuu markale Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Maxamed Baashiir Qaasim.
Labada beelood ee dagaalamaya oo ka soo jeeda degmada Jalalaqsi iyo degaanka Ceel-baraf ee gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa maalmo ka hor ku dagaalamay xuduuda u dhaxeysa labada degaan. Wali waxaa taagan xiisad dagaal oo u dhaxeysa dhinacyadii dagaalamay.
Madaxweyne Farmaajo: Waxaan boogaadinayaa doorashadii xorta aheyd ee ka dhacday Baydhabo
Xildhibaan Sakariye: Aqalka Sare waxaan ka codsanaa iney joojiyaan Xeerka Bangiga ee ka soo gudbay Golaha Shacabka